पोर्न साइट नेपालमा प्रतिबन्ध लाग्दै, अश्लिल सामग्री ब्लक गरिने ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
पोर्न साइट नेपालमा प्रतिबन्ध लाग्दै, अश्लिल सामग्री ब्लक गरिने !
रकारले पोर्न साइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इन्टरनेटका माध्यमबाट यौनजन्य अश्लिल सामग्रीको पहुँचमाथि प्रतिवन्ध लगाउन निर्देशन दिएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा १२१ तथा अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य अश्लिल सामग्रीहरुको आदान-प्रदान, प्रकाशन तथा प्रसारणलाई बन्देज लगाएको बताउँदै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए ।
‘समाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा मोनेटाइज गरेर राखिएका अश्लिल सामग्री पनि हटाउन निर्देशन दिएका छाैं,’ उनले भने ।
यस्ता अश्लिल सामग्रीको इन्टरनेटका माध्यमबाट आदान-प्रदान, प्रकाशन, प्रसारण नगर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक तथा प्रयोगकर्तामा अपील गरेको छ । onlinekhabar बाट
यी हुन् सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड, कतै तपाइको त पर्दैन ! हेर्नुहोस्
सरकारले घटायो नेपाल टेलिकमको इन्टरनेटको मूल्य !
लुकाएर राखिएको वाइफाईको पासवर्ड, यसरी सजिलै सँग थाहा पाउने तरिका सिक्नुहोस !
विश्वभर निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउँने चीनियाँ कम्पनीको तयारी !
हेर्नुहोस् संसारकै ५ बिचित्रका कार (भिडियो सहित)
फेसबुकले मात्र लान्छ नेपालबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ